Fahalalahàna miteny · Oktobra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Fahalalahàna miteny · Oktobra, 2017
Tantara mikasika ny Fahalalahàna miteny tamin'ny Oktobra, 2017
Iran: Firenen'Ny Bilaogera
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana21 Oktobra 2017
Noforonin'ireo mpianatra tao amin'ny Sekolin'ny Fianarana Horonan-tsarimihetsika Vancouver (VFS) ny lahatsary fohy eto ambany, "Iran: Firenen'ny bilaogera". Namorona ity lahatsary ity ho ampahan'ny asan'izy ireo hanaovana ny programa Famoronana Nomerika VFS i Aaron Chiesa, Toru Kageyama, Hendy Sukarya sy Lisa Temes.
Hetsika 24 Ora Manohitra Ny Fanampenam-Bava Amin'ny Aterineto
Fanoherana19 Oktobra 2017
Manomana hetsika antserasera manohitra ny sivana amin'ny Aterineto ny namanay ao amin'ny Reporters without Borders (matetika antsoina hoe "RSF" - Reporters sans Frontières ).
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana19 Oktobra 2017
Ny Tsy Fanaovana Herisetra, Ny Fandalàna Ny Nentim-paharazana ary ny Zon'Olombelona
Nanao antsafa niaraka tamin'ny Dr. Brian Martin, mpanoratra ny tsy fisian'ny herisetra, ary mpampianatra mpiara-miombon'antoka ao amin'ny Siansa, Teknolojia ary ny Fiarahamonina ao amin'ny Oniversiten'i Wollongong ny Fanousian, bilaogy iombonana. Efa nifantoka tamin'ny hetsika tsy mila herisetra nandritra ny volana maromaro ity blaogy ity.
Andron'ny Vehivavy sy ny Firaisankina
Mikarakara fihaonambe mandritra ny Andron'ny Vehivavy ny vehivavy Iraniana sy ny bilaogera. Mampahafantatra antsika i Zannevesht, bilaogera & mpanao gazety Iraniana fa hisy ny fihaonambe hototonsaina ao amin'ny sampan'ny siansa sosialy ao amin'ny anjerimanontolo ao Teheran amin'ny 8 martsa. Ny lohahevitra lehibe horesahina dia ny herisetra atao amin'ny vehivavy.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana18 Oktobra 2017
Tatitra momba ny fandaharan'asa nokleary Iraniana nalefan'ny IAEA tany amin'ny Filankevitry ny Fiarovana ao amin'ny Firenena Mikambana. Manana zavatra maro hozaraina mikasika ity hetsika lehibe ity ny bilaogera.
Iran: Bilaogera Mety Hiatrika Fiampangana ‘Fihantsiana Ady Amin'Andriamanitra’
Misy ny fitomboan'ny ahiahy fa mety ho voampanga amin'ny moharbeh (mihantsy ady amin'Andriamanitra / fankahalàna an'Andriamanitra) amin'ny fotoam-pitsarana ho avy i Shiva Nazar Ahari, mpikatroka ny zon'olombelona, bilaogera sady tonian-dahatsoratry ny tranonkalan'ny Komity ny Mpitati-baovao momba ny Zon'Olombelona ao Iran izay migadra any am-ponja.